Shiinaha Poly Warshadda Xaraashka Xaraashka iyo soosaarayaasha | Fangda
Warqadda Poly Bubble waa baqshad la huwiyey, oo sidoo kale loo yaqaan warqad boorsada barkimaysan ama bacda xumbo, waa baqshad ay ku dhex jirto suuf ilaalin ah si loo ilaaliyo waxyaabaha inta ay socoto. Waxay ka sameysneyd polyetylen la daboolay xumbo si fudud wax loo galiyo loona soo saaro. Boostada xayeysiinta ee shaabadaysan waxay ka kooban tahay xarig dhejis ah furitaan fudud oo fudud.
Cabir: 8 1/2 x 12 + 1.57 "
Dhumucdiisuna: 60mic (hal dhinac)
Cajalad: xabag dhalaal kulul oo tayo sare leh (is-soo saaray)
Daabacaadda: logo, barcode
Baakadaha: 100 kumbiyuutar / kartoon
* FANGDA warqad xumbo badan (baqshad la huwiyey) ayaa laga sameeyay filim xumbo iyo filim LDPE ah, kuma jiraan wax sun ah, waxay leedahay dareen jilicsan oo gacanta ah iyo muuqaal wanaagsan.
* Shaqeyn heer sare ah oo shoogga leh, waxay alaabta ka ilaalin kartaa waxyeelada gariirka.
* Adkaysiga ilmada adag iyo iska caabbinta biyaha.
* Ku-xirnaanta joogtada ah shaashadda shaabadda ayaa gacan ka geysan karta yareynta halista baallasha xirmada ama xatooyada.
* Filimka poly wuxuu noqon karaa midabbo kala duwan sida caddaan, madow, jaalle, casaan iwm.
* Qalabka dibedda sidoo kale waxaa laga samayn karaa filimaan aluminium laga duubay si ay u buuxiyaan baahida macaamiisha.
* Iyadoo leh goobooyin hawo ah, warqadda xayeysiiska xumbada cadcad ayaa ah mid ka mid ah baqshadaha rarka culeyska ugu fudud ee la heli karo (60% - 70% way ka fududdahay jawaanada warqadda lagu duubay). Waxay kaa caawineysaa inaad yareyso kharashaadka ku soo diraya boostada!
* Qeybta isdabamarinta ee la xoojiyay waxay leedahay qaawan balaaran oo dhejis ah oo ku xirnaan doonta gaarsiinta ugu adag. Dusha sare ee siman ee baqshadahan xumbada ayaa ku habboon gacmeedka ama calaamadeynta.
Faa'iidooyinka waraaqaha xumbada:
* Ilaalinta iyo Amniga aan caadiga ahayn
Barkinta ama faashadda waxaa lagu dhisi karaa galka boostada si loo ilaaliyo waxyaabaha ku jira.
Xirmooyinka barkin la adkeysan karo oo alaab ah si looga fogaado waxyeelo naxdin leh.
Waxay ku habboon tahay xawaaraha, ganacsiga elektaroonigga ah, dukaamaysiga, bakhaarka, adeegsiga xafiiska iwm.
Daabacaadda la habeeyay waxay ku dhiirrigelin kartaa iibsadayaasha suurtagalka ah inay iibsadaan sheyga.
* Isdhexgalka Vertical: 3-lakab extrusion filimka, dhalaalka kulul dhalaalka koollo iyo daahan, daabacaadda, dhinto cut dhammaan geeddi-socodka lagu dhammeeyo aqoon isweydaarsiyadayada.
Hore: A4 Waraaqda Warqadda